Hifaninana ny “Basketball, Volley ball” ary hazakazaka 5 km, izay efa fanao isan-taona, ka hikatroan’ireo zandary miasa eto Antananarivo sy ireo sekoly roa dia ny ESGN Moramanga ary ny EGN Ambositra. Filaharana namakivaky ny “Boulevard Ratsimandrava” no nanombohana ny lanonana, ka tonga nanotrona sy nanome voninahitra izany ny Jeneraly Richard Ravalomanana, sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria (SEG) sy ny Kaomandin’ny zandarimariam-pirenena ary ireo manamboninahitra sy manamboninahitra lefitra isan-tsokajiny miasa eto Antananarivo. Nanafatrafatra ireo manamboninahitra jeneraly roa ireo, fa lalao aram-piralahiana no atao fa tsy fifaninam-pirenena ka tsy tokony hampiseho endrika ratsy. Nampanaovana fianianana ireo solontenan’ny mpilalao sy ireo mpitsara. Tanjona ny ho fanamafisana ny fifankatiavana sy ny firahalahiana eo amin’ny samy zandary, hoy ny SEG. Nanolotra lelavola roa tapitrisa Ariary mba hatao ranom-boankazo ho an’ireo mpilalao izy.